Faysal Waraabe muxuu uga carooday heshiiskii Taleex? - Caasimada Online
Home Maqaalo Faysal Waraabe muxuu uga carooday heshiiskii Taleex?
Faysal Waraabe muxuu uga carooday heshiiskii Taleex?
Dadka Soomaalida waxaa lagu yaqaan in ay ku farxaaan marka ay maqlaan in beelo dagaalamay la dhex dhigo Heshiis iyo afgarad. Marka ay sidoo kale maqlaan dagaal ka qarxay qabiilada dhexdooda, waxaa hadal hays u ah “Ilaahow Kala Qabooji.” Arrintaa caksigeed waxaa la soo shir tegay nin Soomaalidu ay ku baratay in afka la gaaro Dir iyo daaroodba, taasoo ay Soomaalidu ka hal qabsato marka ay rabaan inay muujiyaan arrin dabooshay dad iyo degaano badan oo Soomaalida degto. Ninkaasi Waa Faysal cali waraabe oo magaalda Hargaysa magacyo badan looga yaqaan. Magacii ugu danbeeyana ahaa Faysal 4%, ka dib markii doorashadii kal hore oo ahayd tiisii afaraad u helay boqoliiba afar, ayaa ka soo dhex muuqday Tv Ereyal oo u muuqday mid heshiis kula ahaa Faysal aflagaadada iyo Cayda afkiisa ka soo burqanaysay. Faysal ayaa ku eedeeyey Boqor Burhan,oo ahaa Isimkii hogaaaminayay heshiiskii la dhex dhigay beelo mudddo todobo sano ku daalamaya magaalada Taleeex, inuu wado ababul qabyaaladeed. Waxaana la yaab noqotay in werihii warka ka qaadaya aanu weydiin inuu hayo wax cadaynayaa eedda uu usoo jeeediyay Isimka. AkhristowFaysal heshiiskii Ceel-Afweyn isagoo qiiraysan ayuu si niyad ah usoo dhaweeyey oo ku amaanay cid walba oo qayb ka qaadatay.
Dadka Faysal taariikhdiisa hayaa waxay isla qireen in Faysal ka muraala dilaacay in Boqor Burhan ku guulaystay in isagoo aan Maamulna kaashan uu soo afjaro colaaddii ragaadisay magaalo taariikheedka Taleex, oo muddo ka badan toddobo sano isku horfadhiyeen beelo Jufi hoose isku ah oo deggan magaaladaa. Faysal waxaa uu inta badan sheegaa inuu isagu mar walba u taagan yahy cadaalada iyo daryeel, laakiin sida muuqata waxa wax walba kala weyn qabyaaladda iyo in la yiraahdaa Faysal baa sidaa yiri. Marar badan waxaa uu si aan dhaqanka qofka Muislimka ku haboonayn u caayaay madax, culimo, madax dhaqameed, dumar iyo dad sharaf leh oo aan luu quurin cay iyo xag xagasho.
Mar haddi faysal ka maagay inuu dadka Muslimka ah afkiisa ka ilaaliyo, waxaa la gudboon saxaafadda Hargaysa in aanay cod baahiye u noqon ninka noocaas ah. Waxaa saxaafadda xorta laga rabaaa in ay ilaaliyaan anshaxa iyo akhlaaqda suuban ee laga filayo warbaahintooda. Haddii kale wax ay la qaybsanayaan waxii danbi ah ee ka dhasha warka ay fidinayaan.
Ugu danbayntii waxaan raali gelin u diraynaa Boqor Burhaan oo aan geyin in been abuur iyo cay lagula duldhaco. Waxaan leenahay isaga iyo Isimadii kale ee hawsha la qabtay Jazakumullahu Khayran. Kuna Sabra in Cibaadooyinka la amaanay ay xaga sare kaga jirto heshiisiinta dad Muslim ah oo dagaalamay.
Soomaali meel ay joogtaba waxaan leenahay Tolow Colka Jooja!
Qore: Yuusuf A. Geele